Ny Storyboard dia mamorona sary an-tsary avy amin'ny horonan-tsary noho ny AI | Famoronana an-tserasera
Toy ny Adobe, Nasehon'i Google taminay ny fahaizany lehibe mamorona karazana fampiharana izay mifandraika amin'ny sary. Ny fampiharana fakan-tsary azy manokana dia voadona miaraka amin'ny maody HDR miorina amin'ny rindrambaiko, izay afaka maka sary avo lenta; Aleo kosa miteny amin'ireo izay manana telefaona Pixel eny an-tànany.
Ankehitriny dia nanipy ilay G lehibe fampiharana andrana antsoina hoe Storyboard ao amin'ny rafitra fandidiana ho an'ny finday Android. Ity fampiharana ity dia hevitra hampiasa ireo horonantsary ananantsika ireo ary ny Art Intelligence na AI dia afaka "maka" sary mifandraika indrindra amin'io horonantsary io mba hanovana azy ireo ho lasa tantara an-tsary.
Raha mifantoka amin'ireo fandaharana mankany amin'ny AI ny Adobe o Faharanitan-tsaina artifisialy, Google dia mitovy amin'ny andianà fampiharana andrana izay mampiasa ny fanekena zavatra, fizarana olona ary algorithma samihafa hanodinana an'io horonantsary io ary hanova azy ho tantara an-tsary.
Hatramin'ny fotoana hanombohantsika ny fampiharana, dia hangataka aminay hitady video mba hanodinana azy ho azy ary hiteraka sary an-tsary miaraka amin'ny sary mifandraika indrindra. Ny tena tsara indrindra, amin'ny fihetsika midina eo amin'ny efijery dia azontsika atao ny manova ny sivana (amin'ny enina farafahakeliny) sy ny tsy fahombiazan'ny vignet izay hananantsika ao amin'ny tantara an-tsary.
Ary ity no fiasa mitovy amin'ity fampiharana ity izay tsy misy zavatra hafa ankoatr'izay ny fahaizana manova horonantsary ho bala. Fampiharana voalamina tsara, tsotra amin'ny fikirakirana ary azonao maimaim-poana ao amin'ny Google Play Store. Mijanona fotsiny ny fiandrasana azy havoaka amin'ny iOS ary ianareo izay manana iPhone na iPad dia afaka mahazo tombony amin'ny fampiasana sy ny endriny lehibe.
Sintomy ny Storyboard amin'ny Android
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Storyboard, ilay fampiharana Google AI vaovao hanovana ny horonan-tsary ho lasa sary an-tsary
Skoc lafo vidy dia hoy izy:
Raha nisy izany rehefa nianatra aho, asa kely inona no ho notehiriziko
Valiny amin'i Caro Skoc
Hosokosoko mba "hanakorotana" ny horonan-tsarinao: ny fampiharana Google vaovao miaraka amin'ny Art intelligence